UAE - ALinks
Lahatsoratra momba ny UAE
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Dubai ho an'ny karana?
Jona 2, 2021 Antika Kumari asa, Emira Arabo Mitambatra
Mitady asa any Dubai ve ianao? Araka ny tatitry ny LinkedIn "The Middle East and North Africa Recruiting Trends 2017", ny fandraisana mpiasa vaovao dia ho laharam-pahamehana amin'ny orinasan'i Dubai amin'ny taona 2017. Fanadihadiana statistika, fitrandrahana angon-drakitra, politikam-bahoaka, fifandraisana iraisam-pirenena, algorithm
Visa any UAE
Febroary 8, 2021 Antika Kumari Emira Arabo Mitambatra, visa ho
Raha mponina tsy manana visa ianao, dia mila mahazo visa UAE alohan'ny hahatongavanao. Tokony hangataka amin'ny iray amin'ireo endrika roa ianao ho an'ny visa UAE. Afaka mankany amin'ny masoivoho ianao ary mangataka visa. Sa ianao
Visa any Dubai ho an'ny karana
Oktobra 31, 2020 Maitri Jha Emira Arabo Mitambatra, visa ho
Ny zavatra voalohany tokony tadidinao dia ny visa any UAE dia visa any Dubai. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny visa UAE eto. Ka maninona ianao no ato amin'ity lahatsoratra ity? Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny visa any Dubai ho an'ny karana. Ho an'i Dubai, afa-tsy ao
Banky any UAE !!
Aogositra 17, 2020 Shubham Sharma ny vola, Emira Arabo Mitambatra
Ny Emirà Arabo Mitambatra dia malaza eran-tany amin'ny zavatra maro. Malaza eran'izao tontolo izao izy noho ireo tanànany maoderina toa an'i Dubai sy Abu Dhabi ary fantatry ny solika solika ihany koa. Ny UAE dia firenena manana ny sasany amin'ireo tsara indrindra
Mangataha fialokalofana na fiarovana iraisam-pirenena any UAE
Aprily 14, 2020 Karuna Chandna mpitsoa-ponenana, Travel, Emira Arabo Mitambatra
Raha matahotra fanenjehana na fitsaboana tsy misy maha-olona ao amin'ny firenenao ianao dia afaka mangataka fiarovana (fialokalofana). Ity misy famaritana fohy momba ny fomba fangatahana fialokalofana na fiarovana iraisam-pirenena any UAE. Ahoana ny fomba fampiharana amin'ny
Trano fandraisam-bahiny sy tsara indrindra any Dubai
March 11, 2020 Antika Kumari trano fandraisam-bahiny, Emira Arabo Mitambatra
Ny UAE dia toerana mahatahotra hanombohana hazakazaka Atsinanana-Atsinanana. Miorina eo amin'ny ilany atsinanana amin'ny saikinosy arabo, izy io dia trano fonenan'i Dubai maoderina sy Abu Dhabi, ary koa tany anaty fasika lehibe sy ny
Ny rafitry ny sekoly sy ny fampianarana any UAE
Febroary 25, 2020 Antika Kumari am-pianarana, Emira Arabo Mitambatra
Ny rafi-pampianarana any UAE ao amin'ny The School and Education System any UAE dia nanao fanabeazana ho takiana ho an'ny zaza rehetra ao Emiratis izay dimy taona no ho miakatra, ao anatin'izany ireo mpila ravina. Ny fanabeazana fototra sy ny fanabeazana ambaratonga faharoa any amin'ireo andrim-panjakana dia omena maimaim-poana ho an'ny firenena nasionalin'ny UAE
Fianarana any UAE
Novambra 29, 2019 Karuna Chandna fianarana, Emira Arabo Mitambatra
Ny fandinihana ny fanabeazana UAE izay notarihin'ny firenena any ivelany dia mitondra tontolo vaovao sy zava-tsy ampoizina, ary ny Emirà Arabo Mitambatra dia manana ny zavatra rehetra mba hahatadidy ny fianaranao any ivelany. Ny fiainana rehefa mianatra any UAE dia mahaliana satria
Toeram-pivarotana tsara indrindra any UAE
Novambra 24, 2019 Karuna Chandna Emira Arabo Mitambatra
Toeram-pivarotana lehibe ao UAE !! Mety tsy hisy firenena eto amin'izao tontolo izao izay miantsena amin'ny fivarotana toy ny fanaon'ny UAE. Ny tranom-barotra dia manompo ny tanjona rehetra avy amin'ny toerana ifantohan'ny namanao na ny mpiara-miasa amin'ny fialofana amin'ny hainandro mafana.
Toerana tsara indrindra hitsidihana any UAE !!
Novambra 18, 2019 Karuna Chandna Emira Arabo Mitambatra
1-Burj Khalifa Ny tranobe avo indrindra eto an-tany misy 828 metatra ny haavony, Burj Khalifa ao Dubai dia fantatra amin'ny anarana hoe Burj Dubai. Efitra 162 sy antenna ao an-tampon'ny trano no nanome ny rehetra